क्यान्सर रोग लागेको खबर फ़ैलिएपछि साहिद कपुरले मुख खोले – ThikThak News
क्यान्सर रोग लागेको खबर फ़ैलिएपछि साहिद कपुरले मुख खोले
December 11, 2018 December 11, 2018 - LeaveaComment
अहिले जमाना सामाजिक संजाल को छ। कुनै पनि खबर एक पलमा भाइरल बन्न समय लाग्दैन। राम्रो भन्दा पनि नराम्रो खबर ४ गुणा छिटो भाइरल हुने यो सामाजिक संजालमा यस्ता धेरै घटना हुने गरेको छ। यस्तै एउटा खबर भाइरल भयो जसको बारेमा साहिद कपुरले आफैले बोल्नु परको थियो।
शहिद कपुर लाइ पेट सम्बन्धि क्यान्सर छ भन्ने खबर एक साइटले हल्ला चलाएपच्छि तत्कालै भाइरल बनेर फैलियो । एक त बलिवुडका एक्टर अनि सेलिब्रिटी संग जोडिएका कारण यो खबर त निकै चाडो फैलियो । शाहिद कपुरको बारेमा फैलिएको यो खबरले उनको फ्यानमा दुखको माहोल बन्यो , यो खबर झुट यो साँचो हो कसैले पत्ता लगाउन सकेनन । यस्तै हल्लाका बीच साहिद आफैले हल्लाका बारेमा स्पस्टिकरण दिनु परेको छ।
एक भारतीय वेवसाइटले इरफान खान र सोनाली बेन्द्रेपछि बलिउडका अर्का नायक साहिद कपुरलाई पनि क्यान्सर भएको खबर लेखेपछि फ्यानहरु त तनाब मा परे नै, साहिद कपुर समेत तनाब मा परे । उनि आफै अचम्मित हुदै आफुलाई यस्तो केहि रोग नरहेको स्पस्टिकरण दिए।
आफुलाई क्यान्सर भएको खबरको खण्डन गर्दै नायक शाहिद कपुरले ट्विट गर्दै लेखेका छ –‘साथीहरु म एकदमै ठिक छु । तपाइहरु यस्तो हल्लाको पछि नलाग्नु होला ।’ अनाबस्यक हल्ला चलेपछि साहिदको तर्फ बाट यो ट्विट आएको हो। बिशेष गरि सेलेब्रिटिको यस्तो हल्लाले तातिने गरेको सामाजिक संजाल शाहिद कपुरको यो खबर ले केहि दिनसम्म इन्टरनेटमा हंगामा मच्चाएको थियो ।
नेपाली नायक नायिकाको पारिश्रमिक वढ्यो, अनमोल, प्रदीप र साम्राज्ञीहरुले कति लिन्छन्
नेपाली चलचित्र ‘चि मुसी ची’ ट्रेलर सार्वजनिक
निखिल उप्रेतीको नेपाली चलचित्र ' रुद्र ' युटुयुबमा सार्बजनिक
नेपाली फिल्म ‘पासवर्ड’ मा सन्नीको हट आइटम डान्स ( फोटो फिचर )
बलिवुडकि यी नायिकाहरु , जो चाडै गर्दैछन् बिहे
Previous Article निर्दयी आमाले आफ्नै बच्चा डोकोमा राखेर फाल्न लगेपछि………….
Next Article नेपाल आइडल -२ मा कसले मार्ला बाजी ? को बन्ला बिजेता ? ( भिडियो सहित )